Oem Fireproof Safety Box ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်သူ | Weierxin ဘေးကင်းသည်။
2004 ခုနှစ်ကတည်းက Professional Safe Box ထုတ်လုပ်သူနှင့် တင်သွင်းသူ။
Fireproof Rifle Safes
Depository Safes များ
Winder Safes ကိုကြည့်ပါ။
စိတ်ကြိုက် Safe Box
အိမ် > ထုတ်ကုန်များ
Weierxinမီးခံလုံခြုံရေးသေတ္တာ စျေးကွက်တွင် အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် သင့်အား အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Safes နှင့် Vaults များကို ယူဆောင်လာပါသည်။ အကောင်းဆုံးမီးဘေးကင်းမှု၊ အကောင်းဆုံးဖောက်ထွင်းမှုဘေးကင်းမှု သို့မဟုတ် နှစ်ခုပေါင်းစပ်မှုကို လိုချင်သည်ဖြစ်စေ ကျွန်ုပ်တို့'မင်းကို ဖုံးအုပ်ထားပြီးပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏မစ်ရှင်သည် ရိုးရှင်းပါသည်- သင့်မိသားစု၊ အိမ်နှင့် လုပ်ငန်းကို ဖောက်ထွင်းမှု၊ ခိုးမှု၊ မီးလောင်မှုနှင့် သေနတ်အကြမ်းဖက်မှုတို့မှ ကာကွယ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပါသည်။
သင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊'မင်းရဲ့ စိတ်ကူးယဉ်အိမ်လေး ဆောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊'မင်းအိမ်မှာနေတာ နှစ်အတော်ကြာပြီ'အပိုအကာအကွယ်အနည်းငယ်အတွက် သင့်အိမ်တွင် လုံခြုံသော တပ်ဆင်ရန် ဘယ်သောအခါမှ နောက်ကျမည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒါ'သင်၏အရေးကြီးစာရွက်စာတမ်းများ၊ ငွေသား သို့မဟုတ် အဖိုးမဖြတ်နိုင်သော မိသားစုအမွေဆက်ခံပစ္စည်းများကို ကာကွယ်ရန် ဝမ်းနည်းခြင်းထက် ပိုလုံခြုံပါသည်။
Foshan Weierxin Safe ထုတ်လုပ်သူမှ အရည်အသွေးမြင့် နာရီ Winder Safes WW-1200
အရွယ်အစား- H1200*W630*D600mm* ရဟတ်: 12pcs*လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဂဏန်းလော့ခ်*မီးအဆင့်: 120 မိနစ်*မော်တာ-ဂျပန်မော်တာ*3ခြမ်းအစိုင်အခဲတုံး၊ ၎င်း၏အချင်းသည် 30 မီလီမီတာဖြစ်သည်။*လက်ကိုင်- ၃ တုံး
စိတ်ကြိုက်2နာရီ Fireproof File Cabinet FC-4 ထုတ်လုပ်သူ-Foshan Weierxin Safe
အရွယ်အစား: H1530*W530*D680mm* မီးအဆင့်:2နာရီ* လော့ခ်ချခြင်း- LCD ဖြင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ဂဏန်းလော့ခ်* အံဆွဲတစ်ခုစီသည် မီးဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။* လွတ်လပ်သောအံဆွဲသော့ခတ်ယန္တရား* အံဆွဲများအားလုံးကို manual lock တစ်ခုတည်းဖြင့် လုံခြုံစေပါသည်။* အရွယ်အစား3ခု၊ 2၊3သို့မဟုတ်4အံဆွဲဗားရှင်းများ ရွေးချယ်မှု
Weierxin Safe ထုတ်လုပ်သူထံမှ GS-1450-400 အမြန်ဝင်ရောက်ရန် ရှည်လျားသောသေနတ်ဘေးကင်းလုံခြုံ
ပစ္စည်း: သံမဏိအရွယ်အစား- H1450*W400*D300mmအထူ- တံခါး-2မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်-2မီလီမီတာအရောင်: အနက်ရောင်လော့ခ်အမျိုးအစား- အီလက်ထရွန်းနစ်၊ လက်ဗွေရာ၊ သော့N.W.: ၄၈ ကီလိုဂရမ်
အရည်အသွေးမြင့် ထိပ်တန်းဖွင့်အံဆွဲသေတ္တာ ထိတွေ့မျက်နှာပြင် EH-TOP-JH လက်ကား - Foshan Weierxin Safe Co., Ltd
အရွယ်အစား- H130*W380*D350mm*လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ် + လက်ဗွေရာ*စွမ်းရည်- 14"-15" လက်ပ်တော့များ*အရောင်: အနက်ရောင်*အပေါက်များ- နောက်ဘက်တွင် အပေါက် ၄ပေါက်*အသုံးပြုနိုင်သော မြင်ကွင်း- ဟိုတယ်အခန်း/ ရုံးခန်း/ အိပ်ခန်း/ စာကျက်ခန်း/ ဧည့်ခန်း
အရည်အသွေးမြင့် မီးခံနာရီ Winder Safes DZ-1200 12 နာရီ3လက်ဝတ်ရတနာအံဆွဲ -Weierxin Safe Co., Ltd
*အရွယ်အစား- H1200*W700*D600mm*လော့ခ်- လက်ဗွေ + ဂဏန်းစကားဝှက်* မီးအဆင့်: 120 မိနစ်* မော်တော်: ဂျပန်မော်တာ*4ခြမ်းအစိုင်အခဲတုံး၊ ၎င်း၏အချင်းသည် 30 မီလီမီတာဖြစ်သည်။*လက်ကိုင်- ၃ တုံး
အသေးစားမီးခံသေတ္တာ-Foshan Weierxin မီးခံသေတ္တာ
အရည်အသွေးမြင့်ပြီး အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့် အိမ်သုံးသေတ္တာ MS-600-Weierxin ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်း။
မော်ဒယ်နံပါတ်: MS-600ပြင်ပအရွယ်အစား- H600*W400*D330MMအတွင်းပိုင်းအရွယ်အစား- H590*W390*D319mmN.W.: 23KG
Weierxin Safe Factory သော့2လုံးပါသော 1 နာရီ မီးခံသေတ္တာ
သော့ ၂ လုံးပါသော သော့ခတ်ထားသော မီးခံသေတ္တာ တစ်နာရီ မီးအဆင့်သတ်မှတ်။
အကောင်းဆုံး Fingerprint Hand Gun Safe Box G2 Quick Access Portable Company - Weierxin Safe
မော်ဒယ် နံပါတ်: G2အရွယ်အစား- H100*W360*D280 mmNW: 4.0 ကီလိုဂရမ်သံမဏိပစ္စည်းအထူ: တံခါး--3.0 မီလီမီတာ, ကိုယ်ထည်-1.3 မီလီမီတာ
Weierxin Safe Factory မှ Keypad EF-TOP-BG- ဖြင့် ထိပ်တန်းအဖွင့်အံဆွဲ လုံခြုံသည်
* ပစ္စည်း: သံမဏိပြင်ပအတိုင်းအတာ : H150*W410*D350mm* အထူ- တံခါး--4မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်- 1.5 မီလီမီတာ* N.W.(kg): 10kg* လော့ခ်- အီလက်ထရွန်းနစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်* စွမ်းရည်- 14"-17" လက်ပ်တော့များ* အရောင် : အနက်/အဖြူ* LED မျက်နှာပြင်* အောက်ခြေတွင် အပေါက် ၄ ပေါက်* Electrostatic powder coat သုတ်ဆေးပြီးခြင်း။
Hotel Room Safes Touch Screen Digital Password EM-2045-TY
* ပစ္စည်း: သံမဏိပြင်ပအတိုင်းအတာ : H200*W450*D370mm* အထူ- တံခါး--5မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်-2မီလီမီတာ* N.W.(kg): 11kg* လော့ခ်ချခြင်း- ထိတွေ့မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ အီလက်ထရွန်းနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်လော့ခ်* စွမ်းရည်- 14"-17" လက်ပ်တော့များ* အရောင် : အနက်/အဖြူ* LED မျက်နှာပြင်* တပ်ဆင်ခြင်းအပေါက်များ- နောက်ကျောတွင်2ခုနှင့် အောက်ခြေတွင်4ခု* Electrostatic powder coat သုတ်ဆေးပြီးခြင်း။* အီလက်ထရွန်နစ်အစားထိုးခြင်းဖြင့် အရေးပေါ်အဖွင့်များ& စက်ခလုတ်* အသုံးပြုနိုင်သော မြင်ကွင်း- ဟိုတယ်အခန်း/ ရုံးခန်း/ အိပ်ခန်း/ စာကျက်ခန်း/ ဧည့်ခန်း
တံခါးနှစ်ထပ် TMP-800 ပါသော သံမဏိအပြည့်သေတ္တာ - Weierxin Safe ထုတ်လုပ်သူထံမှ
* ပစ္စည်း: သံမဏိအရွယ်အစား- H800*W460*D410mm*လော့ခ်- မျက်နှာပြင်ပါသော အီလက်ထရွန်းနစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သော့ခတ်ခြင်း။* အထူ- တံခါး- 10 မီလီမီတာ၊ ကိုယ်ထည်-4မီလီမီတာ* 10 မီလီမီတာအစိုင်အခဲစတီးတုံး* တံခါးနှစ်ထပ်*အောက်ခြေသေတ္တာထဲတွင် ဗီရိုငယ်* အပေါ်ထောင့်ရှိ ချိန်ညှိနိုင်သော စင်* စကားဝှက်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် အနီရောင်ခလုတ်*8pcs AA ဘက်ထရီ
ဖုန်း : + 86 8927210715
Whatsapp-+ 86 18927210715
Wechat-+ 86 18927210715
Jenny Fung တွင် အရောင်းကို ဆက်သွယ်ပါ။
နံမယ် အီးမေးလ် format အမှား ဖုန်း/WhatsApp ကုမ္ပဏီအမည်